निशान न्युज माघ २०, 2074
रोल्पा । रोल्पामा पाठेघर खस्ने बिरामीको संख्या अत्यधिक रहेको भन्दै गाउँपालिकाले समेत चासो दिन थालेको छ । यसै क्रममा जिल्लाको माडी गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा पाठेघर खस्ने तथा तल्लो पेटको समस्या भएका महिलाका लागि शिविर सञ्चालन गरेको छ ।
शिविरमा २७९ जना महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए । स्वास्थ्य परीक्षण गराएकामध्ये १२ जनामा पाठेघर सम्बन्धी समस्या देखिएकाले थप उपचारका लागि जिल्ला बाहिर पठाउन सल्लाह दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि तथा ल्याब सेवा समेत निःशुल्क प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
महिला रोग विशेषज्ञ डा. अनुका शर्माद्धारा परीक्षण गरिएको सो शिविरमा माडी गाउँपालिकाका अतिरिक्त छिमेकी गाउँपालिका तथा सल्यान जिल्लाका बिरामीले समेत सेवा लिएका थिए ।
गाउँपालिकाभित्र पाठेघर तथा तल्लो पेटको समस्या भएका महिलाको संख्या अत्यधिक रहे पनि उनीहरुले रोग लुकाएर बसिरहेको भन्ने जानकारी पाउना साथ गाउँपालिकाले सो शिविर सञ्चालन गरेको थियो । शिविरमा गाउँपालिकाले ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ ।
कम उमेरमा विवाह गर्नु, गर्भवती भएको बेला भारी बोक्नु, सुत्केरी स्याहार नपाउनु जस्ता कारणले जिल्लामा पाठेघर तथा तल्लो पेट सम्बन्धी समस्या भएका महिला अत्यधिक रहेका छन् । हरेक स्थानीय सरकारले यस्ता शिविर सञ्चालन गरी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउन जरुरी रहेको स्थानीयबासिन्दाको धारणा रहेको छ ।
दाँतको पहेँलोपन हटाउन यी घरेलु उपाय अपनाउनुस
काठमाडौं । पहेँलो दाँतले मानिसको व्यक्तित्वमा नै असर पु-याइरहेको हुन्छ । यही कारण कतिपय मानिस खु...
काठमाडौं । पिसाव लाग्नु स्वभाविक हो । शरिरमा भएको अनावश्यक विकारलाई पिसावको माध्यमबाट बाहिर फ्याँ...
यसरी गर्नुस उच्च रक्तचापको नियन्त्रण
काठमाडौं । मानिसको खानपान र बदलिँदो जीवनशैलीलाई हेर्ने हो भने प्रायः सबैमा अहिले उच्च रक्तचाप भएक...
नवजात शिशुलाई यसकारण पानी खुवाउनुहुन्न
काठमाडौं । आफ्नो बच्चालाई कति उमेरबाट पानी पिलाउन सुरु गर्ने भन्ने अभिभावकमा अन्योल हुन सक्छ । ...
बिहान योगा गर्दा स्वास्थ्यलाई के फाइदा पुग्छ ? हेर्नुस् यस्ता छन् फाईदा
तपाई‌ंको ध्यान तथा योगा गर्ने बानी छ ? यदि तपाईं नियमित योगा र ध्यान गर्नुहुन्छ भने आफ्नो दैनिक...
सप्तरीलाई पनि स्वास्थ्य केन्द्र बनाईने : स्वास्थ्यमन्त्री यादव
काठमाडौं । उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले धरान र काठमाडौंझैँ सप्तरीलाई पनि स्वास्...